Midowga Yurub ayaa Arbacadii maanta ah ku dhawaaqay in uu bilaabayo mashruuc lagu balaarinayo Wax soo saarka Xoolaha iyo Kalluumaysiga si loo ballaariyo dhaqaalaha Soomaaliya, loona horumariyo nolosha beeraleyda, xoollo dhaqata iyo kaluumaysatada.
Nicolas Berlanga Martínez, safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo ka hadlayey xafladii daahfurka oo ka dhacday hotelka Decale caasimada Muqdisho, ayaa sheegay in mashruuca 14.7 milyan euro ($ 17.7 milyan) loogu talagalay in lagu soo nooleeyo dhaqaalaha Soomaaliya, kor loogu qaado fursadaha nolosha, abuurista shaqooyin iyo taageerida koboc loo dhan yahay.
“Waxa ay wax ka qabaneysaa baahida loo qabo hirgelinta qaab dhammaystiran oo isku dhafan oo loogu talagalay horumarka Soomaaliya, waxayna gacan ka geysaneysaa xasilloonida iyadoo la taageerayo afar geeddi-socod oo muhiim ah: xasilinta, maamulka, kobaca dhaqaalaha iyo ilaalinta bulshada,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan howlgalka EU-da.
Kalluumaysatada adkeysiga u leh Kalluumeysiga iyo Xoolaha Nool ee loogu talagalay mashruuca kobcinta loo dhan yahay iyo kuwa waara wuxuu diiradda saarayaa helitaanka suuqyada beeraleyda, wax soo saarka tayada xoolaha iyo kalluunka, iyo dhisidda hay’adaha ka shaqeeya.
“Kor u qaadista qeybaha xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliya ma abuureyso oo kaliya shaqooyin aad loogu baahan yahay, laakiin waxa ay sidoo kale xoojineysaa wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, ”ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Daahfurka mashruuca xoolaha iyo kalluumeysiga oo ah 14 milyan oo euro. Labaduba waa hanti sugeysa xasilloonida iyo nabadda si loo kordhiyo fursadaha ay ku abuuri karaan shaqooyin iyo barwaaqo. Farogelin kasta oo horumarineed ma guuleysan doonto haddii aysan heshiin hoggaamiyeyaasha siyaasadeed” oo muujiyay sida Midowga Yurub ugu xuntahay khilaafka siyaasadeed ee Hogaamiyayaasha Dowladda Faderaalka iyo dowlad-goboleedyada dalka.
Inta badan dadka Soomaaliyeed waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo kalluumeysiga. Isticmaalka hababka aan casriga ahayn ee loo beero beeraha Soomaaliya ayaa xaddidaya awoodda buuxda ee looga faa’iideysan karo teknoolojiyada casriga ah.
Aubameyang iyo Lacazette ayaa kulmaya